ပန်ဒိုရာ: ၂၀၁၂ ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့တွင် ပန်ဒိုရာ ဖတ်ကြားခဲ့သော စာတမ်းငယ်
Posted by pandora at 10:18 AM
အဓိပ္ပါယ်လေးနက်ပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာတမ်းတစ်ခုကို ဖတ်လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။
ရှေ့ဆက်ပြီး အမျိုးသမီးကဗျာဆရာ များစွာ ပေါ်ထွက်လာဖို့လည်း ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။
Well done Pandora.
Appreciate your valuable contributions!
ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့က ပန်ဒိုရာဖတ်ခဲ့တဲ့ စာတမ်းလေးကို
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ စာတမ်းလေးပါ..
ခေတ်အဆက်ဆက် အရေအတွက် နည်းပေမယ့် အရည်အချင်းကတော့ အမျိုးသားတွေကို ယှဉ်နိုင်ခဲ့တယ် လို့ ထင်ပါတယ်.. ငွေတာရီ တို့ ကြည်အေး တို့ စသဖြင့်ပေါ့လေ..။
မြန်မာအမျိုးသမီး ကဗျာဆရာမများ များများ ပေါ်ထွန်းပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုလျှက်..။
မွန်းသူအိမ့် ကဗျာလေးလည်း တော်တော်ကောင်းတယ်..
ငွေတာရီနောက်ပိုင်းမှာ ကဗျာတခုထဲအာရုံထားသွားပြီး မြန်မာကဗျာလောကမှာ ကြီးကြီးမားမားနေရာယူနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးကဗျာဆရာ မရှိတော့ဘူး။ ဒီတော့ အမျိုးသမီးကဗျာဆရာတွေအတွက် ငွေတာရီကဗျာဆုချီးမြင့်ပြီး အားပေးသင့်တယ်။ မြန်မာကဗျာရေးရာ ပညာရှင်ပိုင်းမှာ ပန်ဒိုရာတယောက်ပေါ်ထွက်လာတာကတော့ အားလုံးကကြိုဆိုကြမှာပါ။
အရမ်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် အစ်မရေ ။
နောက်လည်း ကဗျာတွေ အများကြီး ရေးသားနိုင်ပါစေ ... ။
အမြဲ အားပေးနေပါမယ် ။